Amahashe eNoti yiwebhusayithi ebisoloko ikunika iingcebiso kunye namaqhinga ukusukela ngo-2011 ukuze ukhathalele i-equine yakho ngeyona ndlela ibalaseleyo: ngothando, ngentlonipho kunye nayo yonke into eyaziwayo ngumkhweli okanye umlandeli wezi zilwanyana, izifo zabo zamahashe okanye iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo.
Iqela lokuhlela laseNoti Caballos lenziwe ngabantu abazithandayo ezi zilwanyana, kwaye baziingcali kuzo. Ukuba ungathanda ukusebenzisana nathi, gcwalisa le fomu ilandelayo ukuze sikwazi ukunxibelelana.
Ukususela ebutsheni bam kakhulu ndiye ndaqonda ukuba amahashe zizidalwa ezimangalisayo onokulibona ngazo umhlaba kwelinye icala ukuya kwinqanaba lokufunda okuninzi malunga nokuziphatha kwazo. Ihlabathi elilinganayo linomdla njengehlabathi labantu kwaye uninzi lwazo lukunika uthando, inkampani, ukuthembeka kwaye ngaphezu kwako konke bakufundisa ukuba ngamaxesha amaninzi banokuthatha umphefumlo wakho.
Amahashe ebeyinxalenye yobomi bam ixesha elide. Kuba bendiyi tadpole bendimangalisiwe kwiifoto, kwaye nangakumbi bukhoma. Ndizithatha njengezilwanyana ezintle, ezintle kakhulu, kodwa zikrelekrele kakhulu.
Umfazi wasekhaya onxibe impahla. Okwangoku isebenza njengokubeka iliso kunye nokunxitywa kwamahashe eCelta Equestrian Equestrian Social Centre, eHijos de Castro y Lorenzo Imfuyo. Ndine-gelding yaseSpain-Arab kwaye sobabini sisebenza kunye kubugcisa beDressage. Bendingekasisebenzisi isizathu kwaye besele ndizithanda amahashe. Elinye lawona maphupha am likhulu kukuba ndikwazi ukuhambisa ulwazi oluyinyani kubafundi bam oluya kubanceda baphucule amava abo ngezi zilwanyana zimangalisayo, yiyo loo nto ndikwanayo iwebhusayithi ye-equine.
Ukuthanda amahashe esemncinci kakhulu. Ndiyakuthanda ukufunda nokuxelela izinto ezintsha ngezi zilwanyana, zinobungangamsha kwaye zinobungangamsha. Kwaye ukuba ubakhathalele kakuhle, ukuba ubanika yonke into abayifunayo, uya kufumana imbuyekezo eninzi. Kuya kufuneka ube nomonde omncinci ngamahashe, kuba anokukhupha okona kulungileyo kuwo onke.